देश प्रेमीले एक पटक पढ्नै पर्ने कुरा ! ओली ज्यु रेलको डिब्बा चीनको कि भारतको ? « Sajha Page
देश प्रेमीले एक पटक पढ्नै पर्ने कुरा ! ओली ज्यु रेलको डिब्बा चीनको कि भारतको ?
लेखक : दिल निशानी मगर
तर ब्यबहारले पुष्टि गर्नु पर्ने प्राविधिक कुरालाई पिसावको न्यायोे किन गरेको होला ? अचम्मै लाग्छ । रेल्वे सेवा कहाँ देखि कहाँ जाने हो ? कुन रुट हो ? साँच्चिकैको पानी जाहाज खोलामा तैरिन्छ त ? सपना त चन्द्रमामा रकेट पठाउने देख्दा पनि भयो, तर वास्तविकता भने अर्कै छ ।
ओलीसँगै भारत भ्रमणमा गएका राजेश हामालले नेपालको चलचित्र विकासका लागि के योगदान गरे ? रेल र पानी जहाज जस्तै नेपाललाई फिल्मि नगरी बनाउने सन्दर्भमा कुनै सम्झौता भयो कि ? भारतका फिल्मत त नेपालमा बेचिएकै छन्, अब कलिउड(नेताल)को हालत के हुने भो ? दिल्लीमा काम गर्ने कामदारले त्यहाँको राम्रा हलमा नेपाली चलचित्र हेर्न पाउने भए त ?
सायद एजेण्डामा भन्दा प्रचारमा बढ्ता ध्यान भएर होला, प्रधानमन्त्री ओली भारतमा रहदाँ नेपाको सन्दर्भका बिषयमा भन्दा पनि चीनसँगको विषयमा धेरै चर्चा भए, भारतीय मिडियामा ।
नेपालका तर्फबाट एजेण्डाहरु बलियो भएको भए दोश्रो देशको बारेमा किन कुरा जोडिन्थ्यो ? नेपाल–चीन सम्बन्धमा भारतको के लेनादेना ?
(यो लेख दिल निशानी मगरले लोकान्तरका लागी लेखेका हुन्)